Comedy – MMANIME
Gintama: The Very Final Gintama: The Final Movie (2021) Genres- Action, Animation, Comedy Released Date- January 8, 2021 Runtime-104 mins ဂန္တဝင်မြောက် anime Gintama ရဲ့ နောက်ဆုံး movie လေးပါ။ ရီရပေမယ့် ငိုရမယ့် anime ငိုရလောက်အောင်ကို ရီရတဲ့ anime ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Gintama silver soul arc အထိ အကုန်ကြည့်ပြီးမှ ကြည့်ဖို့ recommend ချင်သော်လည်း ဖြတ်ကြည့်ချင်ရင်တောင် Ending ကြီးက သိပ်ကျေနပ်စရာပါ။ #rose_anime
Stand by Me Doraemon2ဇာတ်လမ်းလေးကတော့တစ်နေ့မှာNobitaဟာသူ့အဘွားကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ လက်လုပ်ဝက်ဝံရုပ်လေးကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါ သူ့အနေနဲ့အဘွားကိုပြန်တွေ့ချင်လာပါတော့တယ်။ အဲ့တာကြောင့်Nobitaဟာ Doraemonရဲ့အကူအညီနဲ့ အချိန်နောက်ပြန်သွားပြီး အဘွားနဲ့ပြန်တွေ့ဖို့လုပ်ကြပါတော့တယ်။ Nobitaကိုတွေ့တော့အဘွားဟာစကားတစ်ခုမှာလိုက်ပါတယ်။ "ငါ့မြေးလေးရဲ့သတို့သမီးလေးကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့မြင်ဖူးချင်တယ်"လို့ဆိုသွားပါတယ်။ Nobitaတို့ဇာတ်လမ်းကတော့ဒီမှာစပါပြီ။သူနဲ့Doraemonတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အဘွားရဲ့ဆန္ဒပြည့်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးကြမလဲ။ Nobitaကကော အရင်လိုအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်နေတုန်းလားဆိုတာကိုတော့.....ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ File size… 1.6 GB Quality….Blueray 1080p Format…mp4 Duration…. 1h 36 min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ….. Oke Hmue Ko & Chiaki Encoder ….. Shine Bo Bo Latt
Grand Blue (Live Action) Happy December အမှတ်တရအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ Grand Blue Fanတင်မက Comedy ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးမျှော်နေတဲ့Live Actionကားကောင်းလေးပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ Nosubကြည့်တာတောင်အူတက်အောင်ခွီနေရပါတယ်။ တစ်ကယ်က Subထွက်တာမကြာသေးပါဘူး နေ့တွင်းချင်းလုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ Review -------------------------------- လှပတဲ့ကောင်းကင်လေး.... ငါဒီလို‌ကောင်းကင်မျိုးမတွေ့ရတာကြာပြီ.... ဟမ် ဘာလဲ ဘာမှားနေလို့လဲ.... အယ်..... ငါဘာလို့ ကိုယ်လုံးတီးကြီးဖြစ်နေရတာလဲ ရေငုပ်ကလပ်...? "အထက်တန်းကျောင်းကဆော်လေးတွေပါနဲ့ club ကို၀င်ချင်တာကွ" ဦးလေးရဲ့ အိမ်မှာနေပြီး တက္ကသိုလ်တတ်မဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်နဲ့ Nanako chanကဘ၀ဆိုတဲ့ ‌အိုသာခုလေးတို့ရဲ့ ပျော်ရွင်ဖွယ် ဘဝကြီးကို ‌တဝကြီးခံစားရမှာပါ "ငါ ဒါကြီးကိုထပ်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး..............." (အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့ Grand Blue Anime Seriesကို မတူညီတဲ့ plot, storylineနဲ့ life actionရိုက်ပြထားတာပါ မfailတဲ့ ကားလို့ပြောလို့ရပါမယ် တကယ့် Ioriနဲ့ Kouheiကိုမြင်နေတဲ့ရအတိုင်းပါပဲ reviewက တစ်မျိုးကြီးပေမယ့် ကြည့်ပြီးရင် ဘာလဲနားလည်မှာပါ )
Penguin Highway A fourth-grader investigates the mysterious reason behind the sudden appearance of penguins in his village, which is somehow related toapower fromayoung woman working atadental clinic.
Sword Art Online: The Movie – Ordinal Scale Italian Box office မွာ Pirates of Caribbean နဲ႕Wonder Woman တို႕အထက္မွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ SAO : Ordinal Scale Movie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sword Art Online : Ordinal Scale ရုပ္ရွင္ဟာဂ်ပန္မွာ ရုံတင္ျပသတာ ျကာျမင့္ခဲ႔ျပီ ျဖစ္ေပမဲ႔ နိုင္ငံတကာမွာဆို ယခုလေနွာင္းပိုင္းေတြမွ စတင္ျပသေနတာပါ။ အခုဆိုရင္လဲ Italian Box office ရုံတင္တင္ျခင္းမွာပဲအဆင့္ နွစ္ေနရာကို ခ်က္ခ်င္းရယူနုိင္ခဲ႔ျပီး POTC :deadman tell no tales နဲ႕ Wonder woman တို႕ရဲ႕အေပါ္နံပါတ္2မွာ ရပ္တည္နိုင္ခဲဲ႔ပါတယ္။ Wonder Womanကေတာ့ ဒုတိယေျမာက္ရက္သတၱပတ္ ျဖစ္ျပီး တြမ္ခရုစ္ရဲ႕Mummy ကေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြျကားထဲဲကပဲ ItalianBox Office မွာ နံပါတ္ ၁ရပ္တည္ေနပါတယ္ ခင္ဗ်။ #Alucard
No Game No Life: Zero Overview In ancient Disboard, Riku is an angry, young warrior intent on saving humanity from the warring Exceed, the sixteen sentient species, fighting to establish the "One True God" amongst the Old Deus. Inalawless land, humanity's lack of magic and weak bodies have made them easy targets, leaving them on the brink of extinction. One day, hope returns to ...
Bleach the Movie: Hell Verse Bleach Movie 04 : Hell Verse~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Type - MovieGenres - Action, Comedy, Super Power, Supernatural, ShounenRating - 7.71/10 (My Anime List) Ending Song - Save the one,Save the all Studio - Studio Pierrot Translator - LunaProof Reader - KageEncoder - Ryuki Review by Kage~~~~~~~~~~~~~~ Bleachဆိုတာနဲ့ မသိသူနည်းပါးလောက်တဲ့အထိ နာမည်ကြီး Serieတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Fighting Sceneတွေ၊ Actionတွေကို သဘောကျတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ Animeတစ်ပုဒ်ပါ။Bleach Serieရဲ့ Episode 299ကယခု Movieအတွက် အစပြုပေးထားတဲ့Episodeဖြစ်ပြီး Bleachကို စကြည့်မယ့်သူတွေအတွက်လည်း အခက်အခဲမရှိ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Movieဖြစ်ပါတယ်။ "ငရဲ"ဆိုတဲ့နေရာဟာ အသက်ရှင်စဉ်က မကောင်းမှုတွေ၊ဒုစရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက် ...
Blood: The Last Vampire InformationType: MovieEpisodes: 1Status: Finished AiringAired: Nov 18, 2000Producers: Aniplex, Sony Interactive EntertainmentLicensors: Manga EntertainmentStudios: Production I.GSource: OriginalGenres: Horror, Supernatural, VampireDuration: 48 min.Rating: R - 17+ (violence & profanity)Myanimelist score: 6.69 Reviewဒီကားလေးမှာ မကောင်းဆိုးဝါးနှိင်နင်းသူ Saya ဆိုတဲ့ မိန်းကလေး ပါဝင်တဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုက ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် သောင်းကျန်းနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးများအား လိုက်လံသတ်ဖြတ်ခဲ့ပုံများအား တင်ဆက်ထားပါတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးများက ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား သတ်ဖြတ်ကာ လူသားများ အသွင်ယူပြီး အန္တရာယ်ပေးနေသောကြောင့် Saya တို့ အဖွဲ့မှ ရှင်းလင်းခဲ့ရပုံများအား ကြည့်ရှုရမှာပါ #Jelli
Bungo Stray Dogs: Dead Apple Review: : Bungo Stary Dogsဆိုကတည်းက အထူးတလည် သိပ်ရှင်းပြနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တယ်ဗျ,ဒီ Movieက Season 2နဲ့ Season 3ကြားကArcသဘောမျိုးပါ, 2018မှာ ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးSeason3မှာ Main Villain အဖြစ်ပါခဲ့တဲ့ Fyodorစပါတဲ့ Movieပါ, -Plotကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ စွမ်းအင်အသုံးပြုသူတွေ ကိုယ့်အစွမ်းနဲ့ကိုယ် ပြန်အသတ်ခံရမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့အခါ Dazaiတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်စုံထောက်အေဂျင်စီအတွက် စုံစမ်းစရာကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်လာတယ်,ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လက်နက်ကိုင်စုံထောက်အေဂျင်စီရောPort Mafiaခေါ် ဆိပ်ကမ်းမာဖီးယားက စွမ်းအင်အသုံးပြူသူတွေပါ ကိူယ့်အစွမ်းနဲ့ကိုယ် ပြန်အသတ်ခံရမလို ဖြစ်လာတယ်,ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာလဲနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူက ကြိုးကိုင်နေတာလဲဆိုတာMovieမှာကြည့်ရှုပေးပါ ဒီMovieမှာ အားရဖို့အကောင်းဆူံးကတော့ Fight Sceneတွေ တော်တော်မိုက်ပါတယ် ပြောရရင် Season 2ထက် ပိုပြီး အားရမိတယ်ဗျ,Chuuyaရဲ့ Ability အသုံးပြုပုံတွေAkutagawa နဲ့ Atsushiတိူ့ရဲ့ Combatတွေကလည်း တော်တော်မိုက်ပါတယ်,နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Suicide ဘုရင်ကြီး Dazaiကို အသွင်သစ်နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်#Review_by_Okino
IMDB: 7.9/10 22 votes
MFKZ (2017) ဒီကားလေးကဆိုရင်တော့ ပြင်သစ် နဲ့ ဂျပန် ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Anime လေးဘဲဖြစ်ပါတယ် Dub အနေနဲ့ ကတော့ France နဲ့ Eng ပဲထွက်ပါတယ်ဒီကားလေးကဘာနဲ့တူလည်းဆိုရင် GTA game ကို Anime ပြန်ရိုက်ထားသလိုမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ် သေနတ်တွေနဲ့ အပြီဆော်မယ့်လူမိုက်တွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ နဲ့ လူမိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ Dark Meat မြို့ကြီးမှာ Angelino ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က ပီဇာရောင်းရင်းနေ့စဉ်ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတယ် Vinz ဆိုတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ တိုက်ခန်းစုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်တစ်ခုမှာနေရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုတော့ Willy ဆိုတဲ့ကောင်လေးကကူညီပေးရှာတယ်(အကြွေးတွေလည်းမနည်းဘူး) တစ်နေ့ Angelion တို့တိုက်ခန်းကို ရဲတွေတစ်အုပ်တမကြီးရောက်လာပြီးသူတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကို လာဖမ်းကြတယ် ရဲတွေခမျာကံခေရှာတော့ Angelion ကိုပြန်မတိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့Angelion ကသာမန်လူသားမဟုတ်နေခဲ့လို့ဘဲ ဂြိုလ်သားနဲ့ လူသား မျိုးစိတ်နှစ်ခုရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေ‌ ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာမို့ သာမန်လူသားတွေ နဲ့ သူ့နဂို ဂြိုလ်သားမျိုးစိတ်တွေထက်ကို အစွမ်းထွက်နေခဲ့တယ်အဲ့အချက်ကြောင့်လည်းရဲတွေကလာဖမ်းကြတာပါ စောစောကပြောပြခဲ့သလိုမျိုး ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့မြို့က GTA; San Andreas game ထဲကလိုမျိုး လူဆိုးတွေကိုဟိုတစ်စုဒီတစ်စုနဲ့တွေ့ရမှာပြီး တစ်ချက်မှားကြည့်မိတာနဲ့ သေနတ်မီးခိုးထွက်အောင်ဆော်မယ့်ကောင်တွေပါတွေ့ရမှာပါ ဒီတော့ Angelion တစ်ယောက် လိုက်ဖမ်းတဲ့သူတွေလက်ကနေ ...
IMDB: 6.7/10 2862 votes